भारतिय टिम भित्र किचलो ! धवनको स्थानमा इंग्ल्याण्ड पुगेका ऋषभ पन्तलाई ड्रेसिङ रुममा छिर्न दिईएन – Nepal Trending
भारतिय टिम भित्र किचलो ! धवनको स्थानमा इंग्ल्याण्ड पुगेका ऋषभ पन्तलाई ड्रेसिङ रुममा छिर्न दिईएन
On ३० जेष्ठ २०७६, बिहीबार ११:२९
एजेन्सी । भारतीय क्रिकेट टिमका ब्याटिङ प्रशिक्षक सञ्जय बांगरले ओपनर ब्याट्सम्यान शिखर धवन अझै बाट बाहिर नभएको बताएका छन् ।अस्ट्रेलियाविरुद्धको खेलमा धवनको औँला फ्याक्चर भएको थियो । प्रशिक्षक बांगरले धवन १०–१२ दिनमा ठिक हुने पनि बताए ।
अहिले विकल्पको रुपमा ऋषभ पन्त इंग्ल्याण्ड आएको बताउँदै खेलाडी परिवर्तनबारे अन्तिम निर्णय केही समयपछि लिइने पनि बताए । उनले भने, ‘ऋषभ पन्त केही समय म्यानचेस्टरमै हुने छन् ।’
विकेट कीपर ब्याट्सम्यान ऋषभ पन्त शिखर धवनको विकल्पको रुपमा इंग्ल्याण्ड प्रस्थान गरिसकेका छन् । तर अझै पनि टिम म्यानेजमेन्ट कमिटिले धवनलाई परिवर्तन गर्ने मनस्थिति बनाएको छैन जसका कारण धवनलाई इंग्ल्याण्डमै उपचार गराउन लागिएको हो । शिखर धवन विश्वकपबाट पूर्ण रुपमा बाहिर नभएसम्म पन्तलाई इण्डियन ड्रेसिंग रुपमा प्रवेशको मौका दिइएको छैन ।
बीसीसीआईको मेडिकल टिमले भने धवनले न्यूजिल्याण्ड र पाकिस्तानविरुद्ध नखेल्ने बताइसकेको छ । आइतबार अस्ट्रेलियाविरुद्धको खेलमा धवनले शानदार ११७ रनको पारी खेलेका थिए । जुन खेलमा भारत ३६ रनले विजयी हुँदा उनी म्यान अफ दी म्याचसमेत भएका थिए ।
विश्वकप लागि छानिएको भारतीय टीममा पन्तलाई स्थान नमिलेपछि क्रिकेट जगद विभाजित भएको थियो । एक पक्षले पन्तलाई टीममा राख्नुपर्ने दबाब दिएको थियो भने अर्काे पक्षले चयनकर्ताको फैसला ठीक रहेको भनेका थिए ।
पन्त पाकिस्तानसँग जुन १२ मा हुने खेलमा सहभागी हुने सम्भावना छ । तर बाँकी खेलमा धवनको उपलब्धतालाई लिएर टीम प्रबन्धकको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म उनलाई विकल्पका रुपमा टीममा राखिने छैन । पन्त पछिल्लो एक वर्ष यता प्रभावशाली प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
टि -१० लिगमा सन्दिपको जलवा कायमै ! एकै ओभरमा झारे दुई विकेट